Vola azo tamin�ny Frankofonia Ataovy mangarahara, hoy ny Wake Up Madagascar
Mangataka ny hisian�ny mangarahara amin�ny lafiny rehetra tamin�ny fitantanana ny vola azo nandritra ny frankofonia ny fikambanana Wake Up Madagascar, anisan�ny mijery akaiky ny maharary ireo olona eny ifotony.
Ho azy ireo dia tokony ho fantatry ny vahoaka Malagasy amin’ny antsipirihany izany satria avy amin’ny Malagasy ny fahefana nomena ny fanjakana mijoro amin’izao fotoana. Nandritra ilay hetsika tabataban’ny olom-pirenena notanterahina teny amin’ny kianjan’i Maki ny sabotsy maraina teo no nahafantarana ny hetsika izay marihina fa nahavory olona marobe tokoa, niaraka tamin’ny sorabaventy sy ny fitsofana kiririoka ary ny fikapohana vilany sy lovia. Nambaran’izy ireo fa tsy matahotra ny hanohizana ny hetsika tahaka izao izy ireo mba ho fantatry ny vahiny fa mijaly ny vahoaka Malagasy. Anisan’ny nisongadina tamin’ny fitakian’izy ireo moa ny fiarovana ireo Nosy Malagasy nobodoin’ny Frantsay, ny famerenana amin’ny laoniny ireo tany lasan’ny vahiny hanaovana fitrandrahana toy ny ao Soamahamanina. Niezaka nisakana azy ireo ny mpitandro ny filaminana saingy rehefa niakatra teny amin’ny lalankely ambonin’ny digy izy ireo dia afaka naneho hevitra tamin-kalalahana ihany.